Akụkọ - Ihe ngosi refrigeration Shanghai
Site na Eprel 07, 2021 ruo Eprel. 09, 2021, ụlọ ọrụ anyị esonye na ihe ngosi refrigeration nke Shanghai. Ngụkọta ebe ngosi ihe dị ka square mita 110,000. Ngụkọta nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ 1,225 sitere na mba na mpaghara 10 gburugburu ụwa sonyere na ngosi ahụ. Ọnụ ọgụgụ nke ihe ngosi ahụ na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eme ihe ngosi abụọ ruru ihe ndekọ dị elu.
The ụlọ ntu ọnụ ọgụgụ nke ihe ngosi a: E4F15, ebe: 300 square mita, isi ihe ngosi bụ: Emerson inverter mpịakọta condensing nkeji, Carrier ọkara na ala okpomọkụ integrated condensing nkeji, Bitzer Semi-sealed condensing unit, ịghasa condensing unit na ndị ọzọ na ngwaahịa.
Ihe ngosi ahụ nwetara ngụkọta nke iri puku kwuru iri puku ndị ọbịa, ha nwekwara mmasị dị ukwuu na nka na izi ezi nke ngwaahịa anyị. Nghọta na saịtị na nkwurịta okwu nke ọtụtụ teknụzụ na nhazi okwu. Enwekwara ọtụtụ ndị ahịa na ụlọ ọrụ injinia na-eduga ndị ahịa ka ha gaa na ngwaahịa anyị na saịtị, na-akọwa uru anyị bara ndị ahịa na saịtị. Ọnụ ego ndị ahịa bịanyere aka na iwu na saịtị bụ ihe dị ka nde 3. N'oge ngosi, e nwere 6 ọhụrụ nkwekọrịta mmekọ na 2 mba ọzọ mmekọ. Ihe ịga nke ọma nke ihe ngosi a sitere na mbọ anyị na-emebu. Ụlọ ọrụ anyị na-ebute àgwà mbụ A na-emejuputa nduzi echiche n'ụzọ zuru ezu na usoro ọ bụla, nke ndị ahịa na ahịa ghọtara n'ikpeazụ.
Onye dị mkpa na-ahụ maka ụlọ ọrụ China Refrigeration na Air Conditioning Association kwuru na ụlọ ọrụ ndị a ma ama sitere na United States, Germany na mba ndị ọzọ hazigharịrị ndị nnọchiteanya ha ka ha sonye na ihe ngosi ahụ, nke gosipụtara n'ụzọ zuru ezu ntụkwasị obi nke refrigeration mba ụwa. kpo oku, ventilashion na ikuku oyi n'ahịa China. Ụlọ ọrụ refrigeration na ikuku oyi ga-anọgide na-eme mgbalị na nkà na ụzụ ọhụrụ, nchebe gburugburu ebe obibi nke obere carbon, ọrụ dị elu na nchekwa ike, wdg, iji nyere aka nweta ihe mgbaru ọsọ nke mbelata ikuku carbon na nnọpụiche carbon.
N'okpuru bụ foto ngwaahịa na foto na vidiyo n'oge ngosi.
Oge nzipu: Jun-22-2021